Ụlọ Nche Bekee nke Dị Mfe Nghọta: Oleezi Ihe E Kpebiri?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Fante Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hindi Hungarian Igbo Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kinyarwanda Konkani (Roman) Korean Lithuanian Malagasy Malay Nahuatl (Central) Norwegian Nzema Polish Portuguese Rarotongan Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tarascan Totonac Tsonga Tzeltal Tzotzil Ukrainian Valencian Xhosa Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Ime Ka Ụlọ Nche Bekee Dị Mfe Nghọta
Malite n’Ụlọ Nche Bekee nke Julaị 2011, e bidoro ibipụta Ụlọ Nche Bekee e ji Bekee dị mfe nghọta dee. A sịrị na a ga-eme ya otu afọ ka a mara otú ọ ga-adị. Ugbu a, otu afọ ahụ a gaala, e kpebiekwala na a ga na-ebipụta ya na-aga.
Malite n’ọnwa Jenụwarị afọ 2013, a ga-enwekwa ụdị Ụlọ Nche a n’asụsụ French, Pọchugiiz, na Spanish.
E mere Ụlọ Nche a iji nyere ndị na-eji asụsụ Bekee amụ ihe n’Ụlọ Nzukọ Alaeze Ndịàmà Jehova aka, ma ya abụrụ na Bekee abụghị asụsụ ha.
Kemgbe e bipụtara nke mbụ ya, e nwetala ọtụtụ akwụkwọ ozi ndị mmadụ ji kelee anyị maka ibipụta ya. Otu n’ime akwụkwọ ozi ndị ahụ bụ nke otu nwaanyị Laịberịa aha ya bụ Rebecca dere. Nwaanyị a dị afọ iri isii na anọ, ọ gaghịkwa akwụkwọ. O dere, sị: “ Ana m amụ otú e si agụ ihe. Mgbe ụfọdụ, m gụọ Ụlọ Nche, anaghị m aghọta ya. Ụlọ Nche nke a e mere ka ọ dị mfe nghọta na-atọ m ezigbo ụtọ. Ana m aghọta ihe e dere na ya. ”
Ọtụtụ ndị nne na nna na-eji Ụlọ Nche nke a dị mfe nghọta enyere ụmụ ha aka ịkwado Ọmụmụ Ihe Ụlọ Nche. Ọmụmụ Ihe Ụlọ Nche bụ otu n’ime ọmụmụ ihe Ndịàmà Jehova na-enwe.
E nwere otu nwaanyị aha ya bụ Rosemary. Ya na ụmụ ụmụ ya ndị nwaanyị atọ bi. Nwaanyị a kwuru, sị: “ Ọ na-esiri mụ na ụmụ ụmụ m ndị nwaanyị ike ịmụ Ụlọ Nche. Anyị na-eji akwụkwọ ọkọwa okwu amata ihe ọtụtụ okwu e dere n’Ụlọ Nche pụtara. Ọ na-ewe anyị oge ịmata ihe okwu ndị ahụ pụtara, nke na ọtụtụ mgbe, ụmụ ụmụ m na-echefu isi ihe anyị na-amụ. Anyị na-ejizi oge anyị ugbu a amata ihe amaokwu Baịbụl ndị e dere n’ihe anyị na-amụ kwuru na otú ha si gbasa ihe anyị na-amụ. ”
Vidio: “M Na-ekele Jehova Maka Inyere M Aka”
Vidio: Ụlọ Nche E Ji Bekee Dị Mfe Nghọta Dee Na-enye Aka Ịkụziri Ụmụaka Ihe